China Intamo ukugoqa ice pack ifektri abakhiqizi | UHuanyi
Ukugoqwa kwepakethe leqhwa lentamo
Isitifiketi: SGS MSDS FDA CE REACH
Usayizi: 35 * 16cm
Umbala: Ngokwezifiso Umbala: onsomi, oluhlaza, obomvu
Ilogo: Ingabe ngezifiso
Amandla Wokunikezela: 200000 Piece / Pieces pe month
Ubude obuhlukile bokukhetha kwakho.
Isitifiketi: I-SGS MSDS FDA CE Finyelela
Usayizi:35 * 16cm
Umbala: Umbala owenziwe ngokwezifiso: onsomi, oluhlaza okotshani, obomvu
Ilogo: Ingenza ngezifiso
Amandla Wokunikezela:200000 Piece / Pieces pe inyanga
Ubude obuhlukile bokukhetha kwakho. Ukugoqwa kuhlala endaweni ngenkathi uhamba, umile, noma uhleli. Ukushisa noma ukubanda kweNeck & Beer Wrap kungakusiza uphumule, uvuselele futhi ubuyisele umzimba nomphefumulo wakho.
1.Ukuhlangenwe nakho Kweminyaka eyi-10 kwe-OEM, i-ODM, umbala owenziwe ngokwezifiso, ilogo, amaphakheji. Ingakunika iziphakamiso zochwepheshe, isize ukuthuthukisa isisombululo esihle kakhulu semikhiqizo yokusiza ubuhlungu yepakethe ye-gel.
4.Kulabo emuva iqhwa iphakethe, ehlombe ice iphakethe, hemorrhoid gel amaphakethe, imboni yethu babe osayizi abahlukahlukene futhi ukuma okukhethile, kungangena abantu abaningi.
Ungayenza kanjani i-oda?
2.Ikhasimende lenza idiphozi engu-30% noma i-LC evulekile ngemuva kokuthola i-Pl yethu.
3.Iklayenti livuma isampula lethu le-pp, bese lithola umbiko wokuhlola uma kunesidingo.
6.Umthengisi uhlela imibhalo edingekayo bese uthumela ikhophi yale mibhalo..Imiphumela yekhasimende ibhalansi yokukhokha
7.Supplier thumela imibhalo yasekuqaleni noma telex ukudedela izimpahla.
I-8.Quality iwaranti yezinsuku ezingama-60 ngemuva kokuthunyelwa.
Langaphambilini Ice pack ngentambo
Olandelayo: Iphakethe leqhwa lehemorrhoid
Ukugoqa Okuthambile Kwezintamo